[23 / 10 / 2019] 22 ခရီးသည်ရာခိုင်နှုန်းရာခိုင်နှုန်းသည်အစ္စတန်ဘူလ်လေဆိပ်မှပြောင်းရွေ့လာခြင်းဖြစ်သည်	34 အစ္စတန်ဘူလ်
[23 / 10 / 2019] ကျောင်းသားစာရင်းပေးသွင်းကဒ်ကိုအသုံးပြုရန်အတွက်မည်သည့်အခြေအနေများရှိပါသလဲ။	06 တူရကီ
[23 / 10 / 2019] မြန်နှုန်းမြင့်ရထားစီမံကိန်းအတွက် Goreme Valley အမျိုးသားဥယျာဉ်အခြေအနေကိုဖယ်ရှားထားပါသလား။	50 Nevsehir
[23 / 10 / 2019] Elsan A.Ş. မှထုတ်လုပ်သည့်မက်ထရိုယာဉ်များအတွက်ပထမဆုံးအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသားစွမ်းအင်ထုတ်စက်	06 တူရကီ
[23 / 10 / 2019] Assoc ။ ဒေါက်တာ Pelin Alpkökin၏ ESTRAM သို့အလည်အပတ်ခရီး	26 Eskisehir
[23 / 10 / 2019] Lakes Express သည်နှစ်များစွာကြာပြီးနောက်လေ့လာရေးခရီးများစတင်ခဲ့သည်	32 Isparta
[23 / 10 / 2019] ၀ န်ကြီး Varank သည် Tram ၏ Vatman Cabin သို့သွားသည်	16 Bursa
[23 / 10 / 2019] ဥရောပ၏ပထမမျိုးစပ်စက်ရုံသည်နေ့များကိုရေတွက်သည်	16 Bursa
[23 / 10 / 2019] ပုဂ္ဂလိကစက်မှုဇုန်အသစ်များအား 330 ဒေါ်လာသန်းချီသုံးစွဲနိုင်ရန်အတွက်လက်ရှိအကောင့်လိုငွေပြမှု	16 Bursa
[23 / 10 / 2019] ရုရှားမီးရထားလမ်းများမှ Belgrade Vrbnica မီးရထားကိုအဆင့်မြှင့်တင်မည်	381 ဆားဘီးယား
HomeတူရကီMarmara ဒေသကြီး16 BursaBursa အလုပ်အဖွဲ့နာရီအတွင်းကေဘယ်လ်ကား Changed
16 / 09 / 2019 Levent Elmastaş 16 Bursa, အထွေထွေ, ကောင်းကင်ကြိုး, ခေါင်းစီးသတင်း, Marmara ဒေသကြီး, တူရကီ, TELPHER 0
နာရီအလုပ်လုပ် bursada ကေဘယ်လ်ကားပြောင်းလဲသွားပြီ
အလုပ်လုပ်နာရီ Bursa အတွက်ကေဘယ်လ်ကားပြောင်းခဲ့သည်။ တူရကီရဲ့ Uludag သတိပေးအရေးကြီးဆုံးရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလခရီးသွားစင်တာများနှင့်သဘာဝတရား၏တဦးတည်း လာ. , ပါလိမ့်မည်သူကိုကေဘယ်လ်ကြိုးကား။
140 500 Cabin နှင့်အတူနာရီစွမ်းရည်နှုန်းတထောင်ခရီးသည်,9ကမ္ဘာ့အရှည်ဆုံးကေဘယ်လ်ကားကေဘယ်လ်ကားလိုင်း Bursa လုပ်ငန်း၏ operating နာရီပြောင်းလဲပြီတွေနဲ့ကီလိုမီတာ။
Bursa Inc ကိုရဲ့လူမှုမီဒီယာအကောင့်များမှကေဘယ်လ်ကားဖြင့်ကြေညာချက်, "ချစ်ခင်လေးစားအပ်ပါသောဧည့်သည်များ, စက်တင်ဘာလ 16 09.00-19.00 ကတည်းကစစ်ဆင်ရေးကျွန်တော်တို့ရဲ့နာရီ update လုပ်ပါလိမ့်မည်" ဟုကြေညာချက်ကဆိုသည်။
ချစ်ခင်ရပါသောဧည့်သည်များ, စက်တင်ဘာလ 16 09.00-19.00 ကတည်းကစစ်ဆင်ရေးကျွန်တော်တို့ရဲ့နာရီ update လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ 🍂🍃🍁
ချစ်ခင်ရပါသောဧည့်သည်များ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်ချိန်စက်တင်ဘာလ xnumxth ထံမှ xnumxa ငါ-xnumxpm အဖြစ် updated လိမ့်မည်။ 🍂🍃🍁 #B အကယ်. #bursateleferik # Uludag အဆိုပါ #bursaduyur #Autumn pic.twitter.com/pxnumxwxnumxhxnumxvd
- Bursa ကေဘယ်လ်ကား (@teleferikb လျှင်) စက်တင်ဘာလ 15, 2019
Uludag နှင်းလျှောပြောင်းလဲအလုပ်လုပ်နာရီအမိန့်ရုပ်သိမ်းပြီ 15 / 06 / 2018 တူရကီရဲ့ Uludag သတိပေးအရေးကြီးဆုံးရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလခရီးသွားစင်တာများနှင့်သဘာဝတရား၏တဦးတည်း လာ. , ပါလိမ့်မည်သူကိုကေဘယ်လ်ကြိုးကား။ 140 500 Cabin နှင့်အတူနာရီစွမ်းရည်နှုန်းတထောင်ခရီးသည်,9Bursa အတွက်ကမ္ဘာ့အရှည်ဆုံးကေဘယ်လ်ကားကေဘယ်လ်ကားလိုင်းနှင့်အတူကီလိုမီတာ, ယနေ့ကနေသူတို့ရဲ့အလုပ်လုပ်နာရီပြန်ကျင်းပခဲ့တယ်။ Bursa အဖြစ်ကနေကေဘယ်လ်ကားဖြင့်ကြေညာချက် "xnumxakşaငါ 14.06.2018 09.00 နံနက်ကြာသပတေးနေ့ကတည်းက updated ထားပြီးအဖြစ်နာရီအလုပ်လုပ် Bursa Cableway" ဟုကြေညာချက်ကဆိုသည်။
Bursa အလုပ်အဖွဲ့နာရီအတွင်းကေဘယ်လ်ကား Changed 14 / 11 / 2018 တူရကီရဲ့ Uludag သတိပေးအရေးကြီးဆုံးရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလခရီးသွားစင်တာများနှင့်သဘာဝတရား၏တဦးတည်း လာ. , ပါလိမ့်မည်သူကိုကေဘယ်လ်ကြိုးကား။ 140 500 Cabin နှင့်အတူနာရီစွမ်းရည်နှုန်းတထောင်ခရီးသည်,9ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု၏နောက်ဆုံးရက်သတ္တပတ်လက်ခံရရှိပြီးနောက်မှာလည်းအလုပ်ချိန်ပြန်စီခဲ့ Bursa အတွက်ကမ္ဘာ့အရှည်ဆုံးကေဘယ်လ်ကားကေဘယ်လ်ကားလိုင်းနှင့်အတူကီလိုမီတာ။ Bursa အဖြစ်ကနေကေဘယ်လ်ကားဖြင့်ကြေညာချက်, "ကျွန်ုပ်တို့၏အလုပ်လုပ်နာရီ Bursa Cableway ကြောင့်သတ်မှတ်ထားသောလျှင် 11.30, 19.00 ပိတ်ပြီးနာရီဖွင့်လှစ် 'ဟု updated ပါပြီ။
Denizli အလုပ်အဖွဲ့နာရီအတွင်းကေဘယ်လ်ကား Changed 13 / 12 / 2018 နှင့်ကုန်းပြင်မြင့်ပေါ်တွင်ပေါ်ထွက်လာဖို့စတင်ခဲ့Bağbaşı cable ကိုကားဖြင့်နိုင်ငံသားများကတည်းကအချိန်သည်ဆောင်းကာလ၌ကုန်းပြင်မြင့်နှင်းကျ၌အခြားသောအလှအပဝါသနာအိုးBağbaşıစတင်ဖွဲ့စည်းကြောင်း Denizli လ၏အလယ်ဗဟိုတွင်အချိန်သည်ဆောင်းကာလ၌တစ်ဦးကောင်းတဲ့ဆီးနှင်းဖုံးကေဘယ်လ်ကားနွေရာသီတွင်။ Denizli Denizli ကေဘယ်လ်ကားကေဘယ်လ်ကားလိုင်း၏ website တွင်မိမိအထုတ်ပြန်ချက်အရကဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်ပိတ်ပွဲနာရီကွဲပြားကြောင်းဖော်ပြထားခဲ့ပါတယ်။ အပ်ဒိတ်လုပ် status ကိုအတွက်အောက်ပါအတိုင်းကြေညာချက်အရ, Denizli Ropeway ဖွင့်ပွဲနှင့်ပိတ်ပွဲကြိမ်ဖြစ်ကြ၏။ DENÝZLÝ TELPHER ဆောင်းရာသီနာရီကြားရက်များ: 10: 00 - 19: 00 Weekend: 09: 00 - 20: 00 နွေရာသီကြားရက်များ: 10: 00 - 23: 00 Weekend: 09: 00 - 23: 00
နာရီ operating Uludağနှင်းလျှောစီး LIFT အတွက်တနင်္ဂနွေပြောင်းလဲပြီ 16 / 11 / 2016 တူရကီရဲ့အရေးအပါဆုံးရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလနှင့်သဘာဝခရီးသွားလုပ်ငန်းစင်တာများတ Uludag output ကိုပေး cable ကိုကားတစ်စီးလိုင်း၏ဖွင့်လှစ်နာရီစွမ်းရည်တင်ဆောင်လာသော 176 အခန်းနာရီစီးနင်း 500 ခရီးသည်နှင့်အတူအမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်, Bursa Cableway Inc ကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့ပြီး9ကီလိုမီတာ: Uludağနှင်းလျှောစီးအတွက်တနင်္ဂနွေ operating နာရီပြောင်းလဲပြီအမိန့်ရုပ်သိမ်းပြီ နင်္လာမှသောကြာ 10.00-17.00 အပတ်ကအတွင်းကေဘယ်လ်ကားလိုင်း 09.00-18.00 ၏နောက်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်ကျနော်တို့နိုဝင်ဘာလ၌အကြှနျုပျတို့၏ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူမှုမီဒီယာလမ်းကြောင်းများနှင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်များမှတစ်ဆင့်မတိုင်မီထုတ်ပြန်ကြေညာသကဲ့သို့မင်္ဂလာပါ cable ကိုကားတစ်စီး A.Ş. ကနေလူမှုရေးမီဒီယာကတဆင့်လုပ်ကြေညာချက်လျှင်açıkladı.b၏နာရီအကြားဝန်ဆောင်မှုပေးသွားမှာပါ လုံလုံခြုံခြုံနဲ့အရည်အသွေးမြင့်ဝန်ဆောင်မှုပေးကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖိုးတန်ဧည့်သည်များအဘို့အ Bursa Cableway ...
Kahramanmaras စည်ပင်သာယာဘတ်စ်ကားအလုပ်အဖွဲ့နာရီ Changed 22 / 03 / 2018 အဆိုပါစည်ပင်သာယာဘတ်စ်ကားများ၏ပွနျလညျဖှဲ့စညျးအလုပ်လုပ်နာရီအတွင်း Kahramanmaras မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးအမှုဆောင်။ Kahramanmaras အဆိုပါနင်္လာမှသောကြာ၏ဥက္ကဋ္ဌတာဝန်အောက်တွင်လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရာမြို့တော်မြူနီစီပယ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများဦးစီးဌာနမှအများပိုင်ဘတ်စ်ကားအောက်ပါအတိုင်းအဖြစ်, ညဦးနှင့်တနင်္ဂနွေအဖြစ်ပွနျလညျဖှဲ့စညျးအလုပ်ချိန်ဆုံးဖြတ်ပေးခဲ့သည်: ကြားရက်များ (တနင်္လာနေ့-စနေနေ့) ကြားရက်များ (တနင်္လာနေ့-စနေနေ့) ညဦး Times ကဝန်ထမ်းဘတ်စ်ကားတနင်္ဂနွေ အလုပ်လုပ်ဘတ်စ်ကား
Lakes Express သည်နှစ်များစွာကြာပြီးနောက်လေ့လာရေးခရီးများစတင်ခဲ့သည်
VI ကို။ Mersin Caretta စက်ဘီးပွဲတော်
MMO Bursa ဌာနခွဲ: Bursa အပိုင်းအစYakışရှိပါတယ်
Bursa Inc ကိုအတွက်ဂွန်ဒိုလာလှေကေဘယ်လ်ကားနှစ်သစ်ကူးဧဝရဲ့အလုပ်ချိန်တိုးချဲ့
သတင်းများ Archive လကိုရွေးချယ်ပါ အောက်တိုဘာလ 2019 (447) စက်တင်ဘာလ 2019 (555) သြဂုတ်လ 2019 (508) ဇူလိုင်လ 2019 (633) ဇွန်လ 2019 (504) မေလ 2019 (526) ဧပြီလ 2019 (418) မတ်လ 2019 (521) ဖေဖော်ဝါရီလ 2019 (483) ဇန်နဝါရီလ 2019 (502) ဒီဇင်ဘာလ 2018 (620) နိုဝင်ဘာလ 2018 (504) အောက်တိုဘာလ 2018 (435) စက်တင်ဘာလ 2018 (517) သြဂုတ်လ 2018 (486) ဇူလိုင်လ 2018 (506) ဇွန်လ 2018 (581) မေလ 2018 (467) ဧပြီလ 2018 (545) မတ်လ 2018 (554) ဖေဖော်ဝါရီလ 2018 (500) ဇန်နဝါရီလ 2018 (557) ဒီဇင်ဘာလ 2017 (509) နိုဝင်ဘာလ 2017 (427) အောက်တိုဘာလ 2017 (538) စက်တင်ဘာလ 2017 (455) သြဂုတ်လ 2017 (505) ဇူလိုင်လ 2017 (479) ဇွန်လ 2017 (477) မေလ 2017 (493) ဧပြီလ 2017 (434) မတ်လ 2017 (540) ဖေဖော်ဝါရီလ 2017 (477) ဇန်နဝါရီလ 2017 (538) ဒီဇင်ဘာလ 2016 (487) နိုဝင်ဘာလ 2016 (631) အောက်တိုဘာလ 2016 (657) စက်တင်ဘာလ 2016 (542) သြဂုတ်လ 2016 (608) ဇူလိုင်လ 2016 (485) ဇွန်လ 2016 (661) မေလ 2016 (664) ဧပြီလ 2016 (700) မတ်လ 2016 (804) ဖေဖော်ဝါရီလ 2016 (855) ဇန်နဝါရီလ 2016 (751) ဒီဇင်ဘာလ 2015 (799) နိုဝင်ဘာလ 2015 (640) အောက်တိုဘာလ 2015 (624) စက်တင်ဘာလ 2015 (428) သြဂုတ်လ 2015 (493) ဇူလိုင်လ 2015 (505) ဇွန်လ 2015 (535) မေလ 2015 (577) ဧပြီလ 2015 (622) မတ်လ 2015 (1017) ဖေဖော်ဝါရီလ 2015 (878) ဇန်နဝါရီလ 2015 (1077) ဒီဇင်ဘာလ 2014 (963) နိုဝင်ဘာလ 2014 (826) အောက်တိုဘာလ 2014 (771) စက်တင်ဘာလ 2014 (598) သြဂုတ်လ 2014 (808) ဇူလိုင်လ 2014 (911) ဇွန်လ 2014 (735) မေလ 2014 (957) ဧပြီလ 2014 (972) မတ်လ 2014 (864) ဖေဖော်ဝါရီလ 2014 (720) ဇန်နဝါရီလ 2014 (733) ဒီဇင်ဘာလ 2013 (664) နိုဝင်ဘာလ 2013 (656) အောက်တိုဘာလ 2013 (548) စက်တင်ဘာလ 2013 (570) သြဂုတ်လ 2013 (533) ဇူလိုင်လ 2013 (661) ဇွန်လ 2013 (577) မေလ 2013 (734) ဧပြီလ 2013 (1059) မတ်လ 2013 (1102) ဖေဖော်ဝါရီလ 2013 (811) ဇန်နဝါရီလ 2013 (906) ဒီဇင်ဘာလ 2012 (911) နိုဝင်ဘာလ 2012 (1168) အောက်တိုဘာလ 2012 (830) စက်တင်ဘာလ 2012 (886) သြဂုတ်လ 2012 (974) ဇူလိုင်လ 2012 (863) ဇွန်လ 2012 (591) မေလ 2012 (445) ဧပြီလ 2012 (563) မတ်လ 2012 (699) ဖေဖော်ဝါရီလ 2012 (546) ဇန်နဝါရီလ 2012 (417) ဒီဇင်ဘာလ 2011 (149) နိုဝင်ဘာလ 2011 (35) အောက်တိုဘာလ 2011 (23) စက်တင်ဘာလ 2011 (18) သြဂုတ်လ 2011 (25) ဇူလိုင်လ 2011 (18) ဇွန်လ 2011 (16) မေလ 2011 (13) ဧပြီလ 2011 (13) မတ်လ 2011 (33) ဖေဖော်ဝါရီလ 2011 (24) ဇန်နဝါရီလ 2011 (13) ဒီဇင်ဘာလ 2010 (335) နိုဝင်ဘာလ 2010 (12) အောက်တိုဘာလ 2010 (15) စက်တင်ဘာလ 2010 (12) သြဂုတ်လ 2010 (16) ဇူလိုင်လ 2010 (9) ဇွန်လ 2010 (19) မေလ 2010 (6) ဧပြီလ 2010 (3) မတ်လ 2010 (62) ဖေဖော်ဝါရီလ 2010 (303) ဇန်နဝါရီလ 2010 (1838) ဒီဇင်ဘာလ 2009 (4) နိုဝင်ဘာလ 2009 (1) အောက်တိုဘာလ 2009 (3) စက်တင်ဘာလ 2009 (3) သြဂုတ်လ 2009 (2) ဇွန်လ 2009 (3) မေလ 2009 (2) ဧပြီလ 2009 (3) မတ်လ 2009 (9) ဖေဖော်ဝါရီလ 2009 (4) ဇန်နဝါရီလ 2009 (3) နိုဝင်ဘာလ 2008 (1) အောက်တိုဘာလ 2008 (1) စက်တင်ဘာလ 2008 (2) သြဂုတ်လ 2008 (1) ဇူလိုင်လ 2008 (2) ဇွန်လ 2008 (2) မေလ 2008 (2) ဧပြီလ 2008 (1) မတ်လ 2008 (3) ဖေဖော်ဝါရီလ 2008 (5) ဇန်နဝါရီလ 2008 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2007 (2) အောက်တိုဘာလ 2007 (2) ဇူလိုင်လ 2007 (1) မေလ 2007 (1) ဧပြီလ 2007 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2007 (2) ဇန်နဝါရီလ 2007 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2006 (1) အောက်တိုဘာလ 2006 (3) သြဂုတ်လ 2006 (1) ဇွန်လ 2006 (2) မေလ 2006 (2) ဧပြီလ 2006 (2) မတ်လ 2006 (2) နိုဝင်ဘာလ 2005 (2) သြဂုတ်လ 2005 (1) ဇွန်လ 2005 (1) မတ်လ 2005 (2) ဖေဖော်ဝါရီလ 2005 (1) ဇန်နဝါရီလ 2005 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2004 (1) အောက်တိုဘာလ 2004 (3) ဇူလိုင်လ 2004 (1) မေလ 2004 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2003 (1) အောက်တိုဘာလ 2003 (1) မေလ 2003 (1) မတ်လ 2003 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2003 (1) ဇန်နဝါရီလ 2003 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2002 (1) အောက်တိုဘာလ 2002 (4) သြဂုတ်လ 2002 (1) ဧပြီလ 2002 (1) မတ်လ 2002 (2) ဇန်နဝါရီလ 2002 (2) ဇူလိုင်လ 2001 (1) ဇွန်လ 2001 (1) မတ်လ 2001 (1) မေလ 2000 (3) မတ်လ 1999 (1) အောက်တိုဘာလ 1998 (2) မတ်လ 1998 (1) သြဂုတ်လ 1997 (1) အောက်တိုဘာလ 1996 (1) သြဂုတ်လ 1996 (2) မေလ 1995 (1) သြဂုတ်လ 1992 (1) မေလ 1990 (1)